कुलेश्वरमा मनाइयो देवकोटा जयन्ती  Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७५ मंसिर १ गते ८:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११०औँ जन्मजयन्ती एक साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ । कुलेश्वर आवास परिवार कल्याण संस्था, साहित्य कला संस्कृति समाजको आयोजनामा संस्कृतिविद् शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा जोशीले मानिसले सबैभन्दा पहिले आफूले आफैँलाई चिन्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शुकरातले यसोभन्दा विष पिउनुपरेको थियो । मानिसले सन्तोषको जीवन जिउन सक्नुपर्छ । सत्यम सुन्दरमको जीवन जिउनुपर्छ ।’ उनले यात्री कवितामा देवकोटाले आफूभित्र ईश्वर भएको र त्यसलाई चिन्नुपर्ने बताएको भनाइ राखे ।
उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढेन भनेर किन आत्तिने ? एक दिन त बढिहाल्छ नि ! धेरै लोभ पनि गर्नुहुन्न । कुलेश्वरमा तपाईंहरूले यस्तो राम्रो भवन बनाएर कार्यक्रम गर्नुभयो । यो स्वागतयोग्य काम हो । अब यस्तो काम देशका ७ वटै प्रदेशमा हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा देवकोटासम्बन्धी कविता वाचन गर्ने कविहरू नारायण निरासी, गणेश घिमिरे मार्मिक, श्याम सापकोटा, सीताराम नेपाल, किरण केन रञ्जित, डा भागवत आचार्य, ख्यालमान राई, मुकुन्द न्यौपाने, डम्बर घिमिरे र स्थानीय विद्यार्थी रहेका थिए ।
कार्यक्रमका संयोजक राम विनयले सबैलाई स्वागत गर्दै महाकवि देवकोटाका बारेमा चर्चा गरेका थिए । उनले भने, ‘नेपाली साहित्यका अग्रणी व्यक्तित्व महाकवि देवकोटा सबै नागरिकको मन र मुटु छन् ।’ कार्यक्रमका अध्यक्ष लोकनाथ पोखरेलले देवकोटाको योगदानको जति चर्चा गरे पनि नपुग्ने धारणा राखे । त्यस्तै, बुद्धिमान ढुंगानाले नेपाली साहित्यलाई देवकोटाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
अनलाइनमै दोहोरी गाउँदै मरासिनी
अस्ट्रेलियामा ‘सक्छु एक्लै बाँच्नलाई’ को छायांकन